Izinwele Zemvelo: Chaza iikrele, Indlela yokwenza i-Kinky Hair Curly 2020
1 wenze iinwele zemvelo zenzeke
1.1 Ezinye iindlela:
2 indlela yokuchaza iindlovu
2.1 Isinyathelo 4, vala iingqungquthela endaweni: Yenza iinwele zemvelo zenzeke:
2.2 Isinyathelo 5 solule izinwele zakho:
wenze iinwele zemvelo zenzeke
isitaliti yesithombe: @naturallydidi
Sonke sifuna ukuba sithandane ngokupheleleyo kunye neenwele zethu zendalo. Nangona kunjalo, kunokuba ngumngeni kwaye kuphazamisekile xa ufuna ukuba ama-curls angokwemvelo aqhube, kwaye konke onokukwazi ukulawula kukukhangela kwikotoni nge-curl apha okanye apho. Ndiyifake i-4a 4b izinwele, kwaye ndiyayithanda indlela yokupasa kwindoda emva kokuhlamba kunye nemeko engqongqo, kodwa xa iinyawo zam zinyayo, zitshintsha kakhulu. Ndandisoloko ndiba nomona ngabo bahlakulayo bezinwele zendalo baze ndafunda indlela yokunyamekela kunye nokunyanzela iinwele zam ngokuchanekileyo. Into ukuguqula yakho izakhi zemvelo zibe ziincinci ezide zincinci kulungele ukuhambisa amanzi kwaye uvale ezo curls ngokutsha xa zakha. Esi sikhundla ikakhulu kubodadewethu abenza uhlobo lwezinwele ze-4 ezifana ne-4a 4b kunye ne-4c kwaye bafuna ukuba iinwele zabo zikhangele i-curlier kwaye zichazwe ngakumbi.
ISINYATHELO 1: Yazi ukutyikitya kwakho kwaye ulindele ukuba izinto ezinokubonakala ngathi zinwele. Ukuba unezinwele ze-4c zendalo, awukwazi ukulindela ukujika iinwele zakho zibe ngumbhalo we-3b. Oko kulindeleke okungenakwenzeka. Izinwele zakho zibukeka zibukeka njani ukuba zibukeka njani xa zigcwele amanzi kwaye zizaliswe ngamanzi. Ngokuqhelekileyo, iinwele zethu zijonge kwizinga le-1-2 xa ihamba ngokufanelekileyo. Ubuqhetseba kukuthabatha ezo zengqungquthela xa iinwele zakho zilolu hlobo kwaye uzifake endaweni.
ISIGABA 2: uyazi iinwele zakho zee-porosity level: izinwele zekinky zibe ziinwele ezibukiweyo, kufuneka uqonde ukuba ungayifaka njani inwele zakho ngokuchanekileyo. Oku
isitaliti yesithombe: @olive_chels
Kufuna ukuba wazi iinwele zeenwele zakho kunye neziphi iimveliso eziza kusebenza kakuhle kuwe nantoni na iimveliso eziza kubomisa iinwele zakho. Ukuba unendawo ephantsi, oko kuthetha ukuba kunzima ukunyusa iinwele zakho; Nangona kunjalo, xa usenza uhlaza, luhlala ludla ixesha elide. Izinwele eziphezulu ze-porosity zizalisa ngokukhawuleza kwaye zithatha umswakama lula; nangona kunjalo, ilahlekelwa ngumswakama nje lula. I-Porosity ibhekisela kwinani leebhokhwe kwi-hair shaft yakho. Ndinezinye iinqununu ezihamba ngokubanzi malunga porosity Apha.
Ukuba konke okuhlulekayo, unokusebenzisa izandiso zengcingo zengxowa njenge iinwele zengqungquthela zentsimbi apha,
I-3c ye-clip-ins, kwaye wigs ukuba usakunika ukubonakala kwendalo ngaphandle kokubonakala ngathi unxibe izandiso. Izongezo zangeNwele zeNdalo zinikeza iimveliso zekinky curly kuphela yonke imvelo yendalo! Esikhundleni saloo nto, unwele lweenwele, izinwele ze-kinky curly, afro kinky, afro curly, 4a 4b okanye 4c, kwizinwele ezincinci, sikufumene.
indlela yokuchaza iindlovu
Inyathelo 3 lokunyanzeleka: Amanzi iyona isithako esilungileyo sokufumana iinwele kwiimeko zaso kinky. Amanzi yi-hydrator ephezulu kwaye iza kwenza iifowuni zakho zipaphe. Into emalunga namanzi yomisa ngokukhawuleza, kwaye iipreski zethu zibuyela kwiikinks! Xa iinwele zizaliswe ngamanzi, kwaye ziphuma kwimeko yayo yekinky, eli lixesha elihle lokufaka i-curl creams kunye namafutha asebenza kakuhle emoyeni wakho. I-Glycerin ioli ephantsi kwamanzi engena kwi-shaft shaft. Awuyi kuphuphuma ngokukhawuleza njengamanzi kwaye ushiya i-sheen enhle kwizinwele. Ndiyincoma kakhulu ukuba ndisebenzise le mveliso kanye emva kokuba nisuse i-conditioner yakho. Emva koko sebenzisa i-curl creams kunye nezinye i-moisturizers ozikhethile.
ezikhethiweyo iinwele zendalo
Isinyathelo 4, vala iingqungquthela endaweni: Yenza iinwele zemvelo zenzeke:
Ngeli nqanaba, iinwele zakho kufuneka zibe zimanzi kwaye zitshise. Ngoku ixesha lokuvala ezo curls endaweni. Iqhinga lokufumana iinwele zakho zekinky zikhangele i-curly kukumisa ukutshatyalaliswa nokudambisa amanzi. Ngoku ukuba iinwele zakho ziseburhulumenteni balo, ufuna ukusebenzisa i-gel ekhethiweyo. I-gel oyithandayo ngu-eco styler. Qinisekisa ukuba iimveliso ozibekayo kwiinwele zakho zangaphambili ziya kuxutyushwa kakuhle kunye ne-gel kwaye ungashiyi i-resiky yamhlophe okanye emhlophe. Thatha i-gel uze uyisebenzise kwizinwele zakho ngaphandle kokuphazamisa iindwangu ezidalile. Ngoku ngoku, thintela ngokugqithiseleyo amanzi amaninzi kunye ne-t-shirt endala. Ngezona ziphumo ezilungileyo, hlala phantsi komsi omeyiweyo ukuze i-gel ikwazi ukumisa ngokukhawuleza kwaye inqande ukunyanzeliswa kangako!
Isinyathelo 5 solule izinwele zakho:
Ngoku ukuba iinwele zakho zomile, kufuneka zibukeke zikhazimulayo kwaye zibukhali. Ukuba ubude obuncinane kunye nomthamo, ndincoma ukuthatha umsila otyumayo kunye nokwelula iinwele kwiingcambu ukuze udibanise ukuqina komlingo uze uvumele umoya wakho ukuba ube nomzimba ngaphandle kokuphazamisa iindwangu ozifakile. Xa uvula iinwele zakho ze-kinky ukukhawulela iinwele usebenzisa le ntshukumo kunye nendlela yokukhiya, iinwele zakho ziya kuba nzima kwi-gel; nangona kunjalo, kuya kukhulula nge-2 ngosuku. Ungenza kwakhona i-gel e-flaxse kwi-organic product.
isitaliti yesithombe: @beatbynesh
Isinyathelo se-6 ze-curl zokubamba iinqwelomoya: Ukuba awufuni okanye unqwenela ukusebenzisa i-gel yakho ungasoloko uphazamisa ngaphandle, ukhupha ngaphandle, okanye ezinye izitayela ezisebenzisayo uboya bezinwele zakho.
Iinkonzo kunye nokuThengwa kwe-Mini Twist
Ubulungisa bokungalungi: uCyntoia Brown